कोरोना संक्रमितका लागि नेपालमै पहिलो पटक प्ला’ज्मा बनाउने डाक्टर – Khabar PatrikaNp
कोरोना संक्रमितका लागि नेपालमै पहिलो पटक प्ला’ज्मा बनाउने डाक्टर
August 3, 2020 232
काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई प्ला’ज्मा क’न्भासेन्ट थे’रापी दिइएको छ। पहिले संक्रमित भएर निको भएका व्यक्तिबाट झि’किएको र’गतबाट प्ला’ज्मा बनाएर संक्रमित व्यक्तिलाई उक्त प्ला’ज्मा दिइने विधिलाई प्ला’ज्मा क’न्भासेन्ट थे’रापी भनिन्छ।
नेपाल पहिलो पटक नुवाकोट स्थायी ठेगाना भई हाल बौद्धमा बस्ने २८ वर्षीय युवाले संक्रमितको उपचारका लागि प्ला’ज्मा दान गरेका हुन्। उनी भारतबाट आएका थिए। कोरोना संक्रमण भएपछि उनलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको थियो।
सं’क्रमणमुक्त भएपछि उनी प्ला’ज्मा दिन तयार भएका हुन्। सरकारले प्ला’ज्मा दा’न गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि ती युवाले प्ला’ज्मा दा’न गरेका हुन्। शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक संक्रमितलाई प्ला’ज्मा थे’रापी गर्ने निर्णय भएपछि त्यसका लागि अस्पतालले ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत ब्ल’ड ट्रा’न्सफ्युजन मे’डिसिन विशेषज्ञ डा विपिन नेपाललाई अ’नुरोध गरेको थियो।
डा नेपाल र उनको टिमले कसरी प्ला’ज्मा तयार गरेको थियो? प्ला’ज्मा बनाउने चिकित्सकको अनुभव उनकै शब्दमाः नेपालमा ब्ल’ड ट्रा’न्सफ्युजन मे’डिसिन विशेषज्ञको क’मी छ।
ज’नशक्ति नभएकाले होला शिक्षण अस्पतालले ग्रान्डीसँग अनुरोध गरेको थियो। प्ला’ज्मा दान गर्ने व्यक्तिको नाम गो’प्य राखिएको छ। उहाँलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नै सम्पर्क गरेको थियो। उहाँलाई हामीसँग सम्पर्क गराइएपछि उहाँ असार १५ गते बिहीबार ग्रान्डी अस्पताल आउनु भएको थियो।
उहाँलाई हामीले सुरुमा का’उन्सिलिङ्ग गर्‍यौँ। ‘उहाँले मैले गर्दा अरुको जीवन जो’गिन्छ भने मलाई फेरि दिन मिल्छ भने बोलाउनु होला’भन्नुभएको थियो। उहाँ निकै स’कारात्मक सोचका साथ आउनुभएको थियो ।हामीले उहाँको २०० मिलिलिटर रगत झि’केका थियौं।
त्यसपछि र’गतबाट प्ला’ज्मा छु’ट्टयाउने काम सुरु भयो। सबै प्र’क्रिया पूरा गरी प्ला’ज्मा तयार गर्न ४ घण्टा लागेको थियो। खासमा कोभिडमा पहिलो पटक भएर बि’रामीमा कस्तो अ’सर गर्ला? सफल होला कि नहोला भन्ने कुरा मनमा लागेको थियो।
किनभने, पहिलो प्रयास नै असफल भएमा अरुले प्ला’ज्मा दा’न गर्न वा प्ला’ज्मा लिन नमान्ने वा अ’सफल भयो भनेर नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना पनि भएकाले अलि ‘स्ट्रे’स’ पनि ‘फि’ल’ भएको थियो। हुनतः प्ला’ज्मा हामीले अन्य रो’गका लागि बनाइरहेका हुन्छौँ। अन्य समयमा एक घण्टामा नै तयार गर्न सकिन्छ।
तर, कोभिड-१९ को उपचारका लागि पहिलो पटक भएकाले हामीले अलि बढी स’र्तकता अपनाउनु परेको थियो। सकेसम्म राम्रो गुणस्तरको गरौं भनेर पनि लागेका थियौं। त्यसपछि सोही दिन उक्त प्ला’ज्मा हामीले शिक्षण अस्पतालमा पठाएका थियौँ। अस्पतालमा शुक्रबार राती सो प्ला’ज्मा संक्रमित व्यक्तिमा दिइएको रहेछ। त्यसको राम्रो रि’जल्टले खुसी पनि लागेको छ।
एकपटक एकजना व्यक्तिबाट झि’केको प्ला’ज्माले ४ जनासम्मलाई उपचार गर्न मिल्छ। तर हाम्रो अस्पतालमा यस्तो मेसिन छैन। कतिपय सरकारी अस्पतालमा प्ला’ज्मा थे’रापीका लागि चाहिने मेसिन छ।
तर, ज’नशक्तिको अभावमा ती मेसिन सञ्चालनमा आएका छैनन्। ती मेसिन सञ्चालन गर्ने हो भने एकपटक झि’किएको रगतले ४ जनाको उपचार गर्न सकिन्छ। नेपालमा ब्ल’ड ट्रा’न्सफ्युजन मे’डिसिन विशेषज्ञ एकदमै कम छन्। सरकारले मलाई बोलाएर सहयोग मा’गियो भने म सहयोग गर्न तयार छु।
हरेक एक हप्तामा नि’को भएको व्यक्तिले र’गत दा’न गर्न सक्छ। तर, एकपटक दा’न गरेको ३ महिनापछि मात्र र’गत दा’न गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। पहिलो प्रयास राम्रो भएकाले निकै खुसी लागेको छ ।अब धेरै निको भएका व्यक्तिले दा’न गर्नहुन्छ भन्ने आ’शा छ। स्वास्थ्य खबरमा कल्पना पौडेलले लेखेकी छन् ।
FacebookTwitterRedditShare via EmailPrint
Prevमलेसि,यामा आफ्नै नेपाली सुर,क्षा गार्ड पि,ट्ने नेपाली सुपरभा,इजर प्रहरी निय,न्त्रणमा…
Nextप्रेरणाको श्रोत पहिलो सन्तान छोरासँग रमाउँदै रूपा कृष्ण
स्त्री नै घरको गहना हो, हरेक स्त्रीले सुधार्नु पर्ने यी ५ स्वभाव, घर नै बन्नेछ स्वर्ग
देख्ने बित्तिकै साक्षत अनौठो नाग देवता को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ ॐ ॐॐ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34220)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33512)